Qorshihii Siciid Deni oo fashilmay [Rajo-xumo] | KEYDMEDIA ENGLISH
Qorshihii Siciid Deni oo fashilmay [Rajo-xumo]
Halkaas waxaa ka dhashay caro dhanka Jubbaland ah, waana tallaabo uu ka shallaayay Deni. Taas oo jirta, waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka soo baxay Puntland, firxad ku maqan yihiin, una wareegeen musharrixiin kale.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa sida muuqata durba ku hungoobay rajadiisii ku aaddanayd inuu noqdo musharraxa hela cododka labaad ee ugu badan wareegga 1-aad ee tartanka Madaxweynaha oo dhacaya 15-ka May 2022, oo ku beegan Axadda foodda nagu soo heysa.
Sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen, ilo loo qaateen ah rajadii Siciid Deni, ayaa si weyn hoos ugu dhacday 24-kii saac ee la soo dhaafay, kadib markii codod xooggan oo uu ku tashanayay u wareegeen musharrixiin kale, saacadihii la soo dhaafay, taasoo kooxda Madaxweynaha Puntland ku abuurtay walwal xooggan.
Siyaasiyiin kala duwan oo ka soo kala jeeda Jubbaland iyo Puntland, ayaa KON, u xaqiijiyay in Siciid Deni, uu maalin ka hor casuumaad iyo qado sharaf u sameeyay Xildhibaannada laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland, oo tiradoodu 100 ku dhowdahay, hayeeshee, Saddex u dhig dhig ka mid ah aysan ajiibin casuumaadda.
Wax ka yar 35 xildhibaan oo ah qeyb ka mid ah 48 Xildhibaan oo laga soo doorto Garawe iyo Boosaaso, ayaa xaadiray qadadii Deni, halka aysan Xildhibaannadii Jubbaland cagta dhigin kulanka, taas ayaana dab ku sii shidday shakigii hore u jiray iyo madmadow soo billowday doorashadii Guddoomiye ku xigeynka 1-aad ee Aqalka hoose.
Deni iyo kooxdiisa ayaa dhabar jabiyay qorshe ay hore u dajiyeen hoggaanka labada maamul, kaasoo ahaa in Guddoomiye ku xigeynka 2-aad ee Aqalka sare la saaro Xildhibaan ka socda Garowe, Gudoomiye ku xigeynka 1-aad ee Golaha Shacabkana la saaro Xildhibaan ka yimaada Kismaayo, hayeeshee, labada xil waxaa isku darsaday Puntland.
Halkaas waxaa ka dhashay caro dhanka Jubbaland ah, waana tallaabo uu ka shallaayay Deni. Taas oo jirta, waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka soo baxay Puntland, firxad ku maqan yihiin, una wareegeen musharrixiin kale oo ay hore Axsaabtooda siyaasadeed uga tirsanaayeen, kuwaas oo sii huriyay walaaca Deni.
Qorshaha Deni, ayaa hadda ku soo aruuray, inuu wareegga labaad dhiso, Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, midkii soo gudba, si uu u helo, Ra’iisul Wasaare, maadaama reer Puntalnd siyaasadda heer federal, ama labada kursi ee ugu sarreeysa dalka, ka maqnaayeen shanti sano ee la soo dhaafay.
Shan maalin oo kaliya ayaa ka dhiman in loo dareero doorashada Madaxweynaha, kadib shan sano oo iska daba-wareeg siyaasadeed ah, waxaana kursiga ugu sarreeya dalka tartankiisa u taagan ugu yaraa 30 musharrax taasoo muujineysa in wareegga 1-aad ku baratami doonaa xil-doonayaashii ugu badnaa.